HomeSuuqa kala iibsigaArsenal oo lagu soo waramayaa inay ka fiirsaneyso inay u dhaqaaqdo bisha Janaayo kubadsameeyaha Real Madrid Isco.
Arsenal ayaa lagu soo waramayaa inay ka fiirsaneyso inay u dhaqaaqdo bisha Janaayo kubadsameeyaha Real Madrid Isco.
28 jirkaan reer Spain ayaa todobo kulan oo La Liga ah u ciyaaray Los Blancos ololahan, si kastaba ha ahaatee, wuxuu ku dhibtooday inuu boos joogto ah ka helo kooxda, taasoo keentay warar xan ah oo sheegaya inuu ka tagayo kooxda bilowga. ee 2021.
Everton ayaa si aad ah loola xiriirinayay ciyaaryahanka reer Spain, kaasoo ku guuleystay inuu shabaqa soo taabto 51 jeer, waxaana uu caawiye ka ahaay 54 kale 314 kulan oo uu u saftay Los Blancos tan iyo markii uu kaga soo biiray kooxda Malaga.
Si kastaba ha noqotee, sida laga soo xigtay Defensa Central, madaxa tababaraha Gunners Mikel Arteta ayaa ku booriyay maamulkiisa inay u dhaqaaqaan ciyaaryahanka khadka dhexe ee reer Spain marka dib loo furo suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.
Warbixinta ayaa soo jeedineysa in kooxda ka dhisan Waqooyiga London ay heshiis amaah ah kula soo saxiixan karto Isco iyadoo dookh ay u tahay inay heshiiskiisa joogto ka dhigto dhamaadka xilli ciyaareedka 2020-21.
Kubad sameeyihii hore ee Valencia, kaasoo kaliya 18 bilood ka hartay in uu dhamaado qandaraaskiisa haatan ee kooxda Zinedine Zidane, waxa oo ku guuleystay labo koob oo La Liga ah iyo afar abaalmarin oo Champions League ah intii uu joogay Bernabeu, welina wuxuu awoodaa inuu noqdo ciyaaryahan muhim ah Arsenal ama koox kale oo Premier League ah.
Real Madrid ayaa la rumeysan yahay inay ku qiimeyneyso xiddiga reer Spain adduun dhan 38 milyan oo ginni.